"Les terrasses" Indlu yelizwe
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguGilbert Et Josiane
Ifama endala ehlaziyiweyo, esembindini weCoiron massif, entliziyweni yendalo!
Imizuzu engama-20 ukusuka kuhola wendlela i-A7 uphuma "Loriol".
Le ndlu, engaphezulu kwe-100 m2, nayiphi na induduzo, izolile kwi-600 m yokuphakama, ikhululekile kwaye ikhanya. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nezixhobo zasekhitshini ezisisiseko Ithafa zayo ezinomthunzi kunye nebarbecue, kwindawo edibanisa ukuzola, indalo, ukubiza ukuphumla kunye nokuphumla.
Ukufikelela kumgangatho wokuqala ngamanyathelo
Indawo yokuhlala ibandakanya: ikhitshi eline-raclette, i-toaster, i-waffle iron, i-fryer kunye nekiti yetyuwa; ipepile, imifuno enamakha kunye neetawuli zeti Igumbi lokuhlala elinesofa. I-tv, kunye nesitovu se-pellet, igumbi lokutyela, amagumbi okulala amathathu, elinye lawo likwi-mezzanine, indawo yokudlala yabantwana, igumbi lokuhlambela eline-WC.
Nceda ushiye indlu icocekile kwaye icocekile xa uhamba.
Indlu yodwa entliziyweni yendalo ezolileyo neqinisekileyo. Kufuphi neLaval hamlet, amakhaya alishumi abantu baseParis nabaseSwitzerland nabo beza ekhefini kunye nabantu abahlala unyaka wonke. Kwilali yaseRochessauve ibha kunye nokutya okukhawulezayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Gilbert Et Josiane
UGilbert Et Josiane yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Rochessauve